Sargaal horay Maraykanka ay ugu dareen Liiska Argagaxisada oo isku dhiibay ciidanka Soomaaliya -
Dowladda Maraykanka ayaa liiska argagixisada ee la raadinayo ku dartay saddex kamid ah Saraakiisha sare ururka Al-Qaacida oo uu kamid yahay ku xigeenka Amiirka Alshabaab ee Soomaaliya.
Xubnaha Alqaacida ee liiska argagixisada Mareykanka lagu daray ayaa kala ah: Abukar Ali Adan oo ah Taliyaha ciidamada Alshabaab, waxayna Mareykanku ku sheegeen inuu yahay ku xigeenka Amiirka Alshabab wuxuuna 4-1-2018 isku dhiibay Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya qeebtooda Gobolka Gedo Gaar ahaan Degmada Doolow.
Sidoo kale Ragga liiska ku jira waxaa kamid ah Wanas al-Faqih oo ah hoggaamiye ka tirsan Alqaacidada Waqooyiga Afrika iyo Muhammad Al Ghazali oo ah hoggaamiye ka tirsan Alqaacidda Khaliijka Carabta.
Qoraalka Waaxda Arrimaha Debadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in Abukar Cali Aadan uu yahay ku xigeenka Hoggaamiyaha Al-shabaab ee Soomaaliya. Horraantii Sannadkii 2010 Warbixin ay daabacday Reuters ayaa lagu xusay magaca Abukar Ali Adan, iyadoo xilligaas lagu sheegay Amiirka Al-shabaab ee Xuduudka Soomaaliya iyo Kenya.
2012 ayaa mar kale Sirdoonka Reer Galbeedka laga soo xigtay in Abukar Cali inuu yahay Amiirka Al-shabaab ee gobollada jubbooyinka oo ay xilligaas ku xoogganaayen Xagjiriinta Al-shabaab. Sannadkii 2014 ayaa Abukar ku biiray hoggaamiyaasha sare ee Al-shabaab.
Related Items:Featured, Sar Gaal horey Maraykanka ay ugu Dareen Liiska argagaxisada oo isku Dhiibay Ciidanka Soomaaliya
Saraakiil Maanta lagu Dhaariyay General Kaahiye